तालि-बान कतिको धनी छ ? संगठन चलाउने पैसा कहाँबाट ल्याउँछ ? यी हुन् प्रमुख आय स्रोतहरु !
एजेन्सी : यस महिनामा ता’लिबानले लगभग सम्पूर्ण अफगानिस्तान क’ब्जा गरिसकेको छ। अबको केही दिनमा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी देशका सेना अफगानिस्तान बाट बा’हिरिने छन्।
योसँगै विगत दुई दशक देखि दुई पक्षहरुबीच चलिरहेको सं’घर्ष सम्भवतः अन्त्य हुनेछ। तालिबानका लागि ग’ठबन्धन सेनासँगको संघर्ष निकै कठिन रह्यो। उसका सामू विश्वका धनी देशका सेनाहरु थिए जसलाई न पैसाको क’मी थियो न आ’धुनिक ह’तिया’रको नै।
यस मामिलामा ता’लिबानको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर नै थियो। एक अनुमान अनुसार २०११ मा ता’लि’बा’न ल’डाकुहरुको संख्या ३० हजार थियो। तर २०२१ मा आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ७० हजारदेखि एक लाखको बीचमा पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा यति ठूलो संगठन र च’रमपन्थी अ’भियानहरु चलाउनका लागी ठूलो आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।
२०७८ भाद्र १३, आईतवार २३:४२ गते0Minutes 244 Views